Hlola iMadrid, Spain - World Tourism Portal
Hlola iMadrid, Spain
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eMadrid, eSpain
Okufanele ukwenze eMadrid, eSpain
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eMadrid
Bukela ividiyo emayelana neMadrid
Hlola iMadrid inhlokodolobha nedolobha elikhulu kunawo Spain. Inani labantu bomuzi cishe liyizigidi ezingama-3.3 elinabantu bendawo kamasipala abacishe babe yizigidi ze-6.5. IMadrid yaziwa kakhulu ngamagugu ayo amakhulu amasiko nezobuciko, isibonelo esihle esise-El Prado Museum. IMadrid ibuye igcobe ngobunye obumnandi bokuphila emhlabeni.
Isimo sezulu saseMadrid siyizwekazi; ikakhulukazi eyomile futhi eyeqisayo ngokweqile ngezikhathi ezithile. IMadrid ibona ukukhanya kwelanga okuhlala njalo, ehlobo elishisayo nelomile, nobusika obubandayo obunamakhaza njalo nobusuku kanye nokuwa kweqhwa ngezikhathi ezithile. Intwasahlobo nokwindla kuncane ngokunetha kakhulu kwemvula okugxilwe kulezi zikhathi zonyaka
Isiko laseMadrid lithonywa kakhulu umlando waso wobukhosi, njengesizinda soMbuso WaseSpain. Isigodlo saseNdlunkulu, izindawo ezinkulu kanye nezakhiwo ezisetshenziswa yiSpanish Monarchy, amakamelo amakhulu namasonto maningi eMadrid, kanye nasezakhiweni zasendulo zaphakathi nesikhathi, yize namuhla iMadrid iyidolobha nje elilinganayo Berlin or London, igcwele izakhiwo ezintsha, indlela yokuphila namasiko.
Izakhamizi zaseMadrid, ezizibiza ngegama elithi Madrileños noma igama lesiko elivamile futhi elingajwayelekile elisetshenziselwa igama elithi “amasango” (amakati), ziphila ngendlela ejwayelekile ethonywa isimo sezulu. Ngenxa yokushisa okujwayelekile kwemini ehlobo, “siesta” sisengabonakala lapho ezinye izakhamuzi zithatha ikhefu ukuze zipholile. IMadrileños imvamisa ingakwazi ukukhokhela lokhu “okunethezeka” ngamaholide nangezimpelasonto. Izitolo eziningi zivulekile usuku lonke; izitolo ezincane kuphela ezivame ukuvalwa ngalesi sikhathi. Izisebenzi nalabo abahlupheka kakhulu yindlela yokuphila yaseNtshonalanga bakhetha ukungasilondolozi lesi sikhathi sekhefu futhi basebenze amahora webhizinisi lendabuko, esivame phakathi kwe-9AM ne-6-7PM. Izitolo eziningi zivalwa ngamaSonto, kepha ezinye izingcwecwe ezinkulu nezitolo zomnyango ezixhunyaniswe “namasiko” (izincwadi, umculo, njll.) Zizovulwa usuku lonke futhi zonke ziba ngeSonto lokuqala lwenyanga. Izitolo nezitolo zomnyango endaweni yasePuerta del Sol zivulwa nsuku zonke.
IMadrid kungenzeka inenombolo enkulu kakhulu yamabha ngakunye kwanoma yiliphi idolobha laseYurophu kanye nobusuku obusebenza kakhulu ebusuku; IMadrileños yaziwa ngokuhlala kuze kube sekupheleni kwe-5AM-7AM. Kujwayelekile kakhulu ukubona iGran Vía egcwele abantu ngempelasonto kusihlwa
IMadrid inethiwekhi yezokuhamba yakamuva kakhulu neyakhayo yamabhasi neMetro. Idolobha liyaqhathanisa namanye amadolobha amakhulu aseYurophu ngoba lihlanzekile ngokweqile, futhi abasebenzi bedolobha elinezingubo eziphuzi eziphuzi cishe bangabonakala njalo behlanza imigwaqo nemigwaqo eseceleni komgwaqo.
Eminye imiphakathi edumile yile:
U-Alonso Martínez - Ama-pubs amaningi nama-disco amancane. Kuze kube cishe nge-3AM, isixuku esincane kakhulu, futhi uma ulapha ngaphambi kwamabili, nangaphezulu kweminyaka ye-20, zilungiselele ukuzizwa umdala ngokwanele. Izindawo eziningi ziseduze kwe-3AM, bese abantu bethuthela ezindaweni eziseduzane ukuze baqhubeke nokuhlangana (amakilabhu eGran Vía noma e-Tribunal).
Barrio de las Letras / Huertas - Iningi le Spain 'ababhali abadumile kakhulu babehlala lapho (Cervantes, Quevedo, njll). Iphakathi kweLavapiés, iPuerta del Sol nePaseo del Prado. Yindawo egcwele umlando nezakhiwo ezihehayo futhi yaziwa kakhulu ngenxa yokuxutshwa kwemigoqo, izindawo zokudla, izindawo zokudlela kanye namahhotela. IPlaza de Santa Ana yisikwele esihle. Kungabhekwa "njengokuvakasha kakhulu" kwabanye abantu bendawo.
I-Chueca - Eduze neMalasaña neGran Vía, yisifunda sezitabane (yize kungekho owake wakhishwa inyumbane) onobuntu obuqinile kakhulu. Idizayini entsha, izitolo ezinemfashini, amathofi amahle. Umculo we-pop nowe-elekthronikhi. Kuze kube manje, indawo yonke enendawo yonke edolobheni. Usephenduke waba-chic futhi wabiza kakhulu.
I-Tribunal / Malasaña - Indawo ye-Hip. Ungajabulela ikhefi, isidlo sakusihlwa, incwadi noma iziphuzo nje. Amakilabhu omculo we-rock ne-pop ikakhulukazi, amanye awo asavulwa kusuka ku- “La Movida madrileña” (isikhathi esivumayo samasiko kusukela ekuqaleni kwama-80's). ICalle Manuela Malasaña indawo enhle yokudla. Kunjalo ngeCalle del Pez yize inemigoqo eminingi. IPlaza Dos de Mayo iyinhliziyo yesifunda nendawo enhle yokuthola isiphuzo obala.
UConde Duque - NjengoMalasaña, lesi sigodi sabelana ngezithameli ezifanayo. ICalle Conde Duque igcwele amathofi kanye nendawo yokudlela. Phakathi kwezigcawu ezinkulu esifundeni, iPlaza de Guardias de Corps nePlaza de las Comendadoras, uzothola nezinye izinketho zokuba neziphuzo, ikhefi noma ama-tapas. Isikhungo Samasiko saseConde duque Cultural Centre sivame ukubamba imibukiso, amakhonsathi nemibukiso.
IGran Vía - Indawo engalali. Umgwaqo omkhulu ohlanganisa ama-nightclub amaningi adumile, avame ukuvulwa ukusuka ku-1AM ukuya kwi-6-7AM.
La Latina - Eduze kweLavapiés, iyindawo ongayitholayo ama-tapas futhi egcwele abantu abasha be-bohemian abafuna imigoqo enesitayela. Esigabeni sakudala, imigoqo eminingi emincane nemishado, isixuku esivame ukwedlula (ama-20s sekwedlule isikhathi, ama-30 - uyazi, "abadala"). Kuqukethe umgwaqo weLa Cava Baja. Gwema izindawo eziseMeya yasePlaza kodwa zokushiswa yilanga nakabhiya. Imigoqo eminingi isebenzisa ama-tapas amnandi eCava Baja naseCuchilleros. Indawo egxile eCalle Calatrava (lokho abantu bendawo bakubiza nge- 'Chuecatina') yathuthukiswa yaba yindawo yezitabane (kodwa enobungane kakhulu). Kuyamangaza kakhulu ngeSonto ekuseni, sisuka e11AM kuze kube ntambama ngenxa yendawo esiseduzane nemakethe yezimbotshana i-El Rastro.
I-Lavapiés - Ikota yeDolobha elinamasiko amaningi, enabahlali abangaphezulu kwe-50%, iningi labo livela e-Afrika, e-Asia nase-Latin America. Inani elikhulayo labasentshonalanga bakhetha iLavapies njengendawo yabo yokuhlala eMadrid, ikakhulukazi ngenxa ye-vibe ye-hip eseyitholile eminyakeni yamuva. Amabha amaningi omculo womhlaba nezinye izinkundla eziningi zemidlalo yaseshashalazini nemidwebo yobuciko. ILavapiés mhlawumbe iyindawo enobuhle kakhulu kunayo yonke ne-hippy ngasikhathi sinye eMadrid. Izindawo zokudlela zamaNdiya, izindawo zokudlela ezinhle zekhofi, umculo wase-Afrika nezitolo zaseNingizimu Melika. Izingadi ezimbalwa zomphakathi, ama-co-ops nezitolo ze-eco zisakazeke esifundeni. Akubona izivakashi eziningi lapha njengoba ikota ayinayo ukubonwa okukhulu kepha inendawo eyingqayizivele. Ukuhamba uzungeze ubhiya noma ikhofi kufanelekile.
I-Moncloa - Ngenxa yokusondela kwayo eNyuvesi enkulu eMadrid (Universidad Complutense), iMontloa ihlotshaniswa nezitshudeni nendlela yokuphila yabafundi, imigoqo eminingi eshibhile nama-disco njengoba kuseduze neyunivesithi, yize ezinye zezindawo zivinjelwa kangcono.
ISalamanca - Inqwaba yezitolo ezinkulu ezibizayo, izitolo ezihlukile ngamanani angenakwenzeka nezitolo zomnyango.
I-Torre Europa. Kwakunama-pubs ama-posh amaningi kanye namakilabhu ngaphansi kombhoshongo onqamula enkundleni. Kukhona imigoqo yama-4 noma ama-5 nama-disco endaweni ye-avenida de eBrazil enamathela kwisixuku esincane nesitshudeni.
ICiudad Universitaria. Le ndawo kulapho iningi labafundi lihlala khona njengoba kunabafundi abaningi kule ndawo. Kukhona imigoqo eminingi eshibhile enobusuku obukhulu obuqala kusukela ngoLwesine.
I-Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport itholakala 13km ukusuka enkabeni yedolobha. Ingenye yezikhumulo zezindiza ezinkulu kunazo zonke eYurophu futhi isetshenziswa yizindiza eziningi, futhi nokuba yikhaya le-Iberia Airlines.
Kukhona izindawo zokuqasha izimoto ezitholakala esikhumulweni sezindiza, eziteshini zezitimela, nakwezinye izindawo eziphambili zokuhamba. Qiniseka njalo ukuthi unemephu yomgwaqo ephathwayo! Imigwaqo ngaphakathi kweMadrid kunzima ukuyisebenzisa njengoba kungekho zindawo zokuma nokubheka imephu noma uhlole indlela yakho.
Futhi, uma uncika ekuzulazuleni kwe-GPS, qaphela ukuthi kukhona izihlanganisi ezimbalwa ezilandelanayo ezingaphansi komhlaba ngaphansi kwesikhungo futhi i-GPS yakho kungenzeka ingatholi isinali ngaphansi komhlaba. Hlela amathuba akho ngaphambi kokufaka imigudu.
Idolobha laseMadrid selimbozwe kahle yizinkampani ezinkulu zomhlaba eziqasha izimoto, njenge-Avis, iBudget, iHertz, iTrifty & Europcar, ezinye zalezi zinikezela ngeRent to Buy Equipment. Zonke izinkampani eziqasha izimoto zinikeza intengo yokuncintisana yezimoto zomnotho weklasi nezinketho zemikhawulo engenamkhawulo. Ezinye izinkampani zokuqasha izimoto zasendaweni zinganikeza nentengo yokuncintisana.
Ngenkathi ulwazi lolimi lwesiNgisi lukhula phakathi kwezizukulwane ezisencane, iningi lezakhamizi zaseMadrid lazi amagama ambalwa nje - ngisho nabasebenza emabhizinisini aseMelika anjengeMcDonald's, KFC noma iBurger King kanye nezisebenzi ezikhungweni zokushintshana ngemali akuvamile ukukhuluma isiNgisi esikhulu. Imvamisa ungathola umuntu onolwazi lwesiNgisi emahhotela amakhulu nasezindaweni zezokuvakasha, kepha kungakusiza ukwazi okungenani amagama nemisho emincane yaseSpain.
Iminyuziyamu - amapaki eMadrid
Amakhadi amakhulu wesikweletu namakhadi asebhange aphesheya amukelwa ezitolo eziningi kodwa wazi ukuthi kuwumkhuba ojwayelekile ukucelwa i-ID-isithombe (“DNI”). Uma ubuza i-DNI yakho ulethe ipasipoti yakho, imvume yokuhlala noma ikhadi likamazisi langaphandle. Ngokuyikho noma yini ngesithombe sakho negama elikuso kuzokwamukelwa ngabathengi abaningi bezitolo. Amasiginesha asemakhadini esikweletu ngokuvamile awahloliwe.
Izifunda zeSol-Salamanca. Indawo elula kunazo zonke izivakashi ezungeze iCalle de Preciados, phakathi kukaSol noGran Vía, ikhaya lesitolo somnyango i-El Corte Inglés, amagama emigwaqo ephezulu njengoZara, Gran Vía 32, H&M, Sephora, Pimkie. Isifunda sokuthenga esihle kunazo zonke iSalancanca esenyakatho-mpumalanga yesikhungo, ezungeze iCalle Serrano. Amagama okuqamba aphezulu afana neChanel, iVersace, iHermès, iHugo Boss, uLouis Vuitton, uGiorgio Armani, uDolce e Gabbana noHugo Boss, kufaka nezindwangu eziwuketshezi kanye nokusikeka okubabazekayo komqambi waseSpain u-Adolfo Domínguez, atholakala eCalle Ortega y Petrset. Inhloko yeCalle Serrano kaPurificación García, uRoberto Verino, u-Ermenegildo Zegna, uLeewe, uCarolina Herrera, uManolo Blanik, uCartier, kanye noYves Saint Laurent. IPrada iku-Goya Street, nakuJorge Juan St ungathola izitolo zikanokusho ezengeziwe.
IChueca neFuencarral Street Area - le ngxenye yedolobha beyiyindawo elahliwe neyiseceleni. Kodwa-ke kamuva nje, iguqukele ngokushesha engxenyeni ye-avant-garde nengxenye yanamuhla yeMadrid. Ngenxa yomphakathi wezitabane, kwathathwa izitolo ezindala zaphendulwa izindawo ezinhle kakhulu zeMadrid. Namuhla kuyisibonelo sesimanje, ipharadesi lokuzijabulisa lapho konke kungenzeka khona. Imigwaqo igcwele izindawo zokudlela, amanye amakhofi nezitolo, isibonelo esihle yiMakethe yeFuencarral (iMercado de Fuencarral, ngeSpanishi) umqondo wezindawo zokuthenga inoveli. Ngaphandle kokuthengisa okuyiqiniso, le ndawo iphakamisa izinhlobo ezahlukene ze-gastronomy kanye namaqembu ephathi ebusuku ngezimpelasonto.
ICalle Toledo, eningizimu yeMeya yasePlaza - izitolo eziningi zendabuko ezithengisa izicathulo ezintanjeni zikaSpain (espadrilles noma alpargatas), imikhiqizo yejute nesikhumba kungatholakala lapha.
El Rastro. Kuvulwa kuphela ngeSonto ekuseni. Imakethi enkulu yezindiza eMadrid, enemigqa emigqeni yabathengisi abazimele abathengisa izikhwama ezahlukahlukene ezenziwe ekhaya, kanye nenqwaba yezokuzijabulisa bukhoma. Kubaluleke kakhulu ukuqaphela ukuthi i-Rastro idume ngokuba namaphokhethi amaningi, ngakho-ke qaphela i-handbag yakho futhi ungalethi okuyigugu.
ICuesta de Moyano, (eduzane neMyuo del Prado). Imakethe yencwadi engathandeki yangaphandle.
I-Elercado de San Miguel, San Miguel Plaza (Eduze nasekhoneni elisentshonalanga kweMeya yasePlaza). Imisa ukugqama kwemakethe yendabuko, nezinzuzo zezikhathi ezintsha. Inesakhiwo se-Iron neNgilazi kusuka ku-20th Century. Kukhuphuke kahle ukubonwa okuhle kokudla ngamanani aphezulu okufanisa.
I-Las Rozas Village Chic Outlet Shopping, eCalle Juan Ramón Jimenez 3, Las Rozas. I-MF 11AM-9PM, Sa 11AM-10PM, iSu 11AM-9PM. Ukukhishwa okumangalisayo emadolobheni aseMadrid anezitolo ezinjenge-villa. Iyingxenye yeChic Outlet Shopping villages eYurophu enezinye izindawo ezifana nezitolo ngaphakathi Paris, Barcelona, Dublin, London, ikhayithi, Brussels, Frankfurt, Futhi Munich. Inikela kuze kube yi-60% kuma-brand angaphezu kwama-100 anjengoBally, Burberry, Hugo Boss Man nowesifazane, Pepe Jeans, Loewe, Desigual, Camper, Tommy Hilfiger noVersace. E-Las Rozas Village ungathola nezindawo zekhofi ezinjenge-Starbucks nemigoqo embalwa. Kuthatha imizuzu eyi-40 ukufika lapho ngemoto ukusuka enkabeni yeMadrid. Okuhlangenwe nakho okumnandi kosuku olufudumele lwangeSonto.
IGallinejas ne-Entresijos - Izingxenye ezivela ezingxenyeni ezihlukene zamawundana athosiwe kumanoni alo. Kwendabuko kakhulu futhi kujwayelekile kusuka emadolobheni aseMadrid.
I-Callos a la Madrileña - Ibhodwe elishisayo lesiphundu senkomo enosawoti efana naleyo etholakala eTurkey naseBalkan.
I-Cocido Madrileño - Inkukhu ethosiwe nenyama nemifino. Ukwahluka kwalesi sididi yindlela ekhonzwa ngayo. Isobho, amaphuphu nenyama kuyakhonzwa kudliwe ngokuhlukile.
Oreja de Cerdo - Izindlebe zezingulube, zithosiwe kugalikhi. Lesi sidlo esithandwayo sidliwa kakhulu kulo maphakathi neSpain.
I-Sopa de Ajo - Isobho lika-Garlic yisobho elinothile nelinamafutha ngokuvamile elihlanganisa i-paprika, i-ham hamated yaseSpain, isinkwa okuthosiwe kanye neqanda eliboshwe. Ukuhluka kwalesi isobho kwaziwa ngokuthi yi-Sopa Castellana.
Kuyamangaza ukuthi iMadrid, etholakala enkabeni yeSpain inokudla kwasolwandle okusezingeni eliphakeme kunezindawo eziningi ezisogwini. Le mfanelo iza ngentengo, futhi iningi labantu baseSpain ngezikhathi ezithile liba ne-mariscada (iSpanish ngenxa “yomkhosi wasolwandle”). Ukuthola ukudla kwasolwandle kweMadrid kungaba, kumvakashi, okuhlangenwe nakho okuzobiza izindleko.
Imikhiqizo yenyama nenyama (iJamon Iberico, i-morcilla, i-chorizo ​​njll) ngokujwayelekile ikhwalithi ephezulu kakhulu eSpain futhi ikakhulukazi eMadrid.
Izindawo eziningi zokudlela kanye nama-cervecerías asendaweni yaseSol nasePlaza anezikhangiso “zebhizinisi elijwayelekile” emigwaqweni ehamba ngezithombe ezinemikhangiso ehlukahlukene yezitsha ze-paella. Lawa ma-paellas ngokuvamile anekhwalithi embi futhi kufanele agwenywe. Uma ufuna i-paella enhle, eyiqiniso yaseSpain, imvamisa kungcono kakhulu ukuthola uhlobo lokubiza olubiza kakhulu, “hlala phansi” olunikeza izitsha ezahlukene ze-paella.
Inketho engcono kakhulu yindawo yaseLa Latina eseningizimu yeMeya yasePlaza, ikakhulukazi emgwaqweni weCava Baja. Ukuze ujabulele ukuvakasha okumnandi kwale ndawo ungajoyina i-Old Madrid Tapas & Wine Tour. Kukhona nezitolo ezimbalwa ezifana ne-Calle Arenal ezinikezela ngokudla para llevar (ukuthatha).
Emabhageni, umuntu ngokuvamile u-oda amapuleti ahlukene ngosayizi, i-ración okusho isidlo esigcwele, i-media ración isitsha sesigamu noma inguqulo encane okungaba yipapa, i-pinxto noma ipincho.
AbaseSpain abadli isidlo sasemini kuze kube yi-2 noma i-3 pm, futhi isidlo sakusihlwa asiqali kuze kube yi-9 noma i-10 pm. Njengomthetho wesithupha, izindawo zokudlela zisebenzela ukudla kwasemini kusuka ku-1PM (ngaphambili ezindaweni ezivakashelwayo) kuze kube yi-3: 30PM, bese uvala futhi uvulekele isidlo sakusihlwa e-8: 00PM, besebenza kuze kube yi11: 00PM. Lolu hlelo luvame ukudlela izindawo zokudlela ngoba imigoqo kanye "nama-mesones" zivame ukuvulwa usuku lonke zinikela ngama- “tapas” amaningi nama- “bocadillos” (ama-rolls) ngentengo eshibhile. Uma ufisa ngempela, iqembu elijwayelekile lamaketanga wokudla okusheshayo lihlala livulekile usuku lonke.
Ubusuku bokuqala buqala ngokuhamba kwesikhathi eMadrid, iningi labantu lilibhekise amabha e-10-11PM.
Amakilabhu ngokuvamile avulwa cishe phakathi kwamabili. Uma ungangena kunoma yikuphi ngaphambili ungakuthola kungenalutho. Amakilabhu amaningi awavali kuze kube yi-6AM, futhi noma kunjalo wonke umuntu usagcwele impilo.
IMadrid idolobha eliphephile. Amaphoyisa ayabonakala, futhi idolobha linamakhamera. Kuhlala kuhlala kunabantu abaningi emigwaqweni, ngisho nesikhathi sasebusuku, ukuze ukwazi ukuwela idolobha ngokuvamile ngaphandle kokwesaba.
Uhambo losuku eduze neMadrid